မုတ်ဆိတ်ဖြတ်ခြင်း: သင်၏မျက်နှာဆံပင်အတွက်ပုံစံများကိုရှာဖွေပါ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Michael Serrano | | ရိတ်လိုက်ပြီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု
မုတ်ဆိတ်ဖြတ်တာကိုသင်သိသလား မျက်နှာဆံပင်သည်ဖက်ရှင်မကျကြောင်းစစ်ဆေးရန်လမ်းပေါ်တွင်သာခြေချရန်သာလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်မုတ်ဆိတ်မျှသာမဟုတ်ဘဲမျက်နှာပုံစံအားလုံးရှိမျက်နှာဆံပင်အကြောင်းဖြစ်သည်။
သင်၏မုတ်ဆိတ်မွေးများကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်တွင် တင်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ မတူညီသောနှုတ်ခမ်းမွှေးများ၊ ဆိတ်မွေးနှင့်မုတ်ဆိတ်မွေးစတိုင်အမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်ပြီးသင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်.
beard cut ဟူသောအသုံးအနှုံးသည်မျက်နှာပေါ်ရှိဆံပင်ပုံစံနောက်ကိုဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အရှည်နှင့်အတူရောထွေးခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤပုံဆွဲခြင်း (သို့) ပုံသဏ္naturalာန်သည်သင်၏သဘာဝတွင်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အတူသဘာဝကျနိုင်သည်။ သို့သော်လူအများစုက ပို၍ အလုပ်လုပ်သောပုံစံကိုဝတ်ဆင်လိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရလဒ်မှသဘာဝကိုရှာဖွေရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုသည်။
မုတ်ဆိတ်ဖြတ်တောက်မှုအတွက်အဓိကareaရိယာနှစ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏အမြင့်နှင့်အထူကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်မုတ်ဆိတ် (နှင့်မျက်နှာကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်) လုံးဝကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်ဗဟိုareaရိယာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အစဉ်အဆက်၌, သင်၏မျက်နှာဆံပင်၏ကွဲပြားခြားနားသောareasရိယာများကိုသင်၏အရသာများ၊ နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်မေးရိုး၏အလယ်ပိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမုတ်ဆိတ်များအတွက်မျက်နှာဆံပင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအပိုင်းများကိုရိတ်သည် (သဘာဝကျကျအချိုးကျသောရလဒ်ရရှိရန်သေချာအောင်) ရိတ်သည်။ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုများစွာရှိပြီး၊ ဤနယ်မြေများကိုပိုင်းခြားရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းထည့်ပါက ပို၍ ပင်တိုးပွားလာလိမ့်မည်.
နှုတ်ခမ်းမွှေးများသည်အထက်နှုတ်ခမ်းတစ်ခုလုံးကိုစတိုင်ကျစွာဖုံးအုပ်နိုင်သည် 80 နှင့်ရဲသောမြင်းခွာဖွဲ့စည်းရန်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆင်းသွားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ပါးလွှာသောအရာတစ်ခုခုကိုပိုနှစ်သက်ပါက၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သည့်ဂန္တ ၀ င်သောခိုင်မာသောအရည်အသွေးရှိသည့်ပါးလွှာသောနှုတ်ခမ်းမွှေးများအတွက်ထိပ်ဆုံးတွင်ချုံ့နိုင်သည်။
သင်ဘေးထွက်အပေါက်များကိုနှုတ်ခမ်းမွှေးနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဝံ့သလား။ ဒီစတိုင်ကမုတ်ဆိတ်မွေးလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းထားတဲ့မေးစေ့နဲ့ပေါ့။ အပေါ်ဆွဲနှုတ်ခမ်းမှနားတစ်ဖက်မှနောက်တစ်ခုသို့ဆွဲသည်။ သင်စိတ်ကူးကိုနှစ်သက်သော်လည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနည်းစေရန်ပိုနှစ်သက်ပါကမုတ်ဆိတ်ကိုဘေးဘောင်မှအဆက်ပြတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနိမ့်သို့ဆင်းသွားပြီးမေးရိုးပေါ်သို့တက်သွားသည့်မြင်းခွာမုတ်ဆိတ်ကိုစဉ်းစားပါ၊ သို့သော်ယခင်ဖြတ်ချက်နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်ဘေးထွက်ဘားသို့မရောက်နိုင်ပါ၊ သို့သော်မေးရိုး၏အကျယ်ဆုံးသောနေရာတွင်ရပ်သည်။
ဤလိုင်းများအထက်တွင်နှုတ်ခမ်းပါးပါးသောကျောက်ဆူးတစ်ခုရှိသည်။ ထိပ်နှင့်အောက်သည်စတုရန်းပုံသို့မဟုတ် rounded shape ကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်ဂန္ထဝင် version ကိုလည်းသင်သိကောင်းသိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆက်ဖြတ်ထားသောဆိတ်သငယ်သို့မဟုတ်ရေပေါ်နှုတ်ခမ်းမွှေးများကိုပိုနှစ်သက်ပါက Royale စတိုင် (ထိပ်နှင့်အောက်ဘက်တွင်အကျယ်တ ၀ င့်) သို့မဟုတ် Van Dyke (ထိပ်ဆုံးတွင်အကျယ်ဆုံး) ကိုစဉ်းစားပါ။
သင်တစ် ဦး နှုတ်ခမ်းမွှေးမရှိဘဲဆိတ်မွေးမြူနိုင်ပါတယ်။ မေးစေ့မှလွဲလျှင်အရာအားလုံးကိုရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်မေးစေ့နှင့်အကျယ်တူသောကျယ်ပြန့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ပေါက်ပေါက်သို့တက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်နီးကပ်စွာနေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤပုံစံတွင်သင်သည်နှုတ်ခမ်းအောက်ဆံပင်ပုံစံကိုထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့သွားသောမျဉ်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ကကျဉ်းစေခြင်းငှါ, နှစ်ဖက်စလုံးပေါ်မှာချုံ့နိုင်ပါတယ်။ မေးစေ့၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသောဒေါင်လိုက်မျဉ်းကဲ့သို့ကျဉ်းမြောင်းနိုင်သည်။
Goatee ဗန် Dyke
sideburns နှင့်အတူနှုတ်ခမ်းမွေးမပါဘဲ Goatee
အားလုံးဆံပင်ကိုကြီးထွားခွင့်ပြုသည်။ အထူးသဖြင့်ရှည်လျား။ ရှည်လျားသောမုတ်ဆိတ်မွေးကိုရရှိရန်မျိုးရိုးဗီဇသည်များစွာပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ မုတ်ဆိတ်ရှည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လိုင်းများတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ များသောအားဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာက၎င်းကိုလည်ပင်းတွင် (နှင့်လိုအပ်လျှင်သာကျန်နေရာများတွင်) ကန့်သတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များဖြင့်ကြီးထွားစေခြင်းငှါခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်သဘာဝအားဖြင့်သင်သည်ကတ်ကြေးနှင့်ဆံပင်ကိုကတ်ကြေးနှင့်အတူထားရှိရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ မုတ်ဆိတ်မွေး.
သို့သျောလညျး သင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါကသင်၏သဘာဝသင်ကြားမှုလမ်းကြောင်းကိုသင်၏သင်တုန်း၏အကူအညီဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အမျိုးသားအချို့သည်ပါးပြင်ကိုပါးလွှာစွာချထားကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည် ပို၍ ချောမောလှပသောဟန်ရှိခြင်းကြောင့်ဗဟိုareaရိယာသည်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသည့်မုတ်ဆိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းမွှေးများနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုလျှော့ချခြင်းက undercut နှင့်အတူတူပါပဲ၊
သင်မုတ်ဆိတ်သည်မေးရိုးနှင့်နီးကပ်စွာနေလိုသည်ဆိုပါကသင်လိုအပ်သောမုတ်ဆိတ်သည်။ များသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်တုန်း (ဘေးထွက်အပေါက်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မေးစေ့) တို့ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်၊ သို့သော်သင့်အားဖြတ်သွားခြင်းနှင့်အတူသတိထားပါ၊ ၎င်းသည်ယောက်ျားအားလုံးနီးပါးအပေါ်အလွန်ကောင်းမွန်သောထိုမုတ်ဆိတ်ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒါကအလယ်အလတ်စတိုင်လ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်အစားတွေနဲ့ရှေးရိုးစွဲအသွင်အပြင်နှစ်ခုစလုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ရိတ်လိုက်ပြီ » မုတ်ဆိတ်ဖြတ်တောက်မှု